Adobe Lightroom ao amin'ny kinova 2.0 dia mitondra andian-dahatsoratra vaovao manan-danja amin'ny Android | Famoronana an-tserasera
Adobe farany mahazo ny batery Ary toa nanolo-tena haneho fitiavana bebe kokoa momba ny fampiharana Lightroom amin'ny Android izy amin'izay ny mpampiasa rehetra afaka mahazo tombony maromaro amin'ny fanovana sary.
Androany dia navaozina ho amin'ny kinova 2.0 izy io izay nanampiana fiasa vaovao maromaro toy ny Fanohanana endrika RAW ary fitaovana Erase Haze izay hanampy anao hanampy izany vokatra manokana izany amin'ireo sary nalainao tamin'ny fakan-tsarin'ny telefaona Android anao.
Ary tsy nijanona tao amin'ireo safidy roa tena mahaliana toy ny endrika RAW sy ny fitaovana Erase HazeFa kosa, ny fanatsarana dia natao ho an'ny Tone Division hanatsarana ny lokony amin'ny fisongadinana sy aloky ny sary. Amin'izany fomba izany dia afaka mamorona loko miloko tsara amin'ny sary ianao na mamerina ny endrika nentin-drazana sary mainty sy fotsy.
Ao anatin'io fitaovana miloko sy B&W aiza izao isika dia afaka mahita toetra mitovy amin'ny kinova desktop miaraka amina andiana slider isaky ny loko. Endri-javatra iray hafa dia amin'ny alàlan'ny teboka fanaraha-maso ao amin'ny fitaovana curves mba hanovana tanteraka ny feo sy ny tsy fitovian'ny sary.
Mamarana, a mora kokoa ny mizara sary mivantana amin'ny rindrambaiko Adobe Premiere Clip izay tsy nisy ela tao amin'ny Android ary mamela ny fanovana horonantsary mandroso.
Anananao ity rindranasa ity maimaim-poana tanteraka avy amin'ny Play Store satria nohavaozin'i Adobe teo aloha ary ny mpampiasa rehetra dia afaka manakaiky kokoa ny kalitao ankafiziny. Fotoana tsy manam-paharoa hanana fakantsary tsara amin'ny findainao sy ny mety hametrahana Lightroom ao amin'ny kinova 2.0.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Adobe Lightroom ao amin'ny kinova 2.0 dia mitondra andian-dahatsoratra vaovao manan-danja amin'ny Android